Bit By Bit - पालन व्यवहार - 2.4 अनुसन्धान रणनीति
अनुसन्धान रणनीति कस्तो उपयोगी छन् ठूलो डाटा स्रोतहरु र पनि पूर्ण पालन डाटा को निहित सीमितता यी दस विशेषताहरु, दिइएको? हामी कसरी प्रश्नहरू सोध्न जब र गर्छन् प्रयोगहरू चलाउन छैन सिक्न सक्छौं, त्यो हो? त्यो बस हेर्दै मान्छे रोचक अनुसन्धान गर्न नेतृत्व गर्न सकेन सक्छ, तर यो मामला छैन।
गणना कुराहरू, पूर्वानुमान कुराहरू, र प्रयोगहरू approximating: म अवलोकनीय डाटा देखि सिक्दै लागि तीन मुख्य रणनीति हेर्नुहोस्। म यी दृष्टिकोण-जो "अनुसन्धान रणनीति" वा "अनुसन्धान व्यञ्जनहरु" भनिन्छ सकिएन -and म उदाहरणहरू तिनीहरूलाई चित्रण छौँ प्रत्येक वर्णन छौँ। यी रणनीति न परस्पर विशेष वा exhaustive छन्, तर तिनीहरू अवलोकनीय डाटा संग अनुसन्धान को धेरै कब्जा गर्छन्।
हामी empirically फरक सिद्धान्त देखि अनुमानहरू बीच adjudicating गर्दा गणना कुराहरू, कि पालना दाबी पूर्व चित्रण गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। पूर्वानुमान, र विशेष गरी nowcasting, नीति निर्माता लागि उपयोगी हुन सक्छ। अन्तमा, ठूलो डाटा अवलोकनीय डाटा देखि causal अनुमान गर्न हाम्रो क्षमता बढ्छ।